$524M NEM zuru na hack of Japanese mgbanwe Coincheck
Japanese cryptocurrency mgbanwe Coincheck gosikwara na $524 nde uru nke digital ego e zuru-abụ na-eme ka ọ kasị otu hack na mgbanwe, ọbụna outweighing na Mt. Gox iro nke 2014.
Nke ahụ bụ dị ka Japanese akwụkwọ akụkọ Asahi Shimbun, nke na-akọ na Coincheck kwuru na ụfọdụ 500 nde nkeji nke a cryptocurrency maara dị ka NEM, uru banyere 58 ijeri yen, na a kpọgara si ahịa 'wallets.
The eto ugbu a daworo banyere $430 nde, na spooked investors ere apụ ha ojiji esonụ asịrị nke hack mbụ Friday.
Coincheck na-kọrọ na ka na-agbalị iji chọpụta ọdịdị nke agha, ma e kwuru na ndị ọzọ cryptocurrencies e mmetụta. Ụfọdụ ndị nkatọ na-arụtụ aka na Coincheck enweghị nke multi-SIG wallets, nke multiple igodo na-mkpa ikike a azụmahịa, dị ka akụkụ nke ọma na facilitated hack.
Canadian ike ụlọ ọrụ ga-eji eke gas nke m cryptocurrency
Na eke gas ahịa na-atụ anya iji nọgide na ala, otu Alberta emeputa abịa na a akwụkwọ ụzọ mbo mbuli ya ala akara: iji ya gas stream ike kọmputa sava na ga na-egwupụtakwa nwere ọrụ na-enye cryptocurrencies dị ka Bitcoin.
Iron Bridge Resources Ltd. mara ọkwa na ọ ga-etolite ọhụrụ enyemaka akpọ Iron Bridge Technology ná mgbalị isonyere cryptocurrency na blockchain craze - kamakwa arbitrage ihe dị iche n'etiti uru nke Bitcoin, ugbu a kpọrọ na US $ 11.188 kwa mkpụrụ ego, na AECO gas, ugbu a kpọrọ na $1.98 kwa puku cubic ụkwụ.
Iron Bridge ezube ọkụ gas na-emepụta ọkụ eletrik, ma na-eji na ọkụ eletrik na ike kọmputa ngwaike Ngwuputa digital ego.
Anya isi na 215 kilowatt awa nke ọkụ eletrik na-mkpa na-emepụta otu Bitcoin, Iron Bridge nwere ike irite US $ 49 kwa mcf maka ya gas.
Nke ahụ bụ karịa 30 ugboro price Iron Bridge ugbu a na-enweta n'ihi na ya gas, anya isi ugbu a AECO na Bitcoin ahịa.
"Dị nnọọ ka m na-enwe nchegbu, ọ bụla akọrọ gas na-emeputa na ndị ụlọ ọrụ ga-enweta a inwego na a ozi ọma, n'ihi na mbadamba nduzi na-aga na-eche ihe mere ụlọ ọrụ ike na-arara a òkè nke ha mmepụta nke a. "GMP FirstEnergy osote onyeisi oche na ngalaba-isi nke ike ahịa na trading Trent Boehm kwuru.
Eidoo ngwakọ Exchange
Eidoo eweta a Hybri ...
Karịrị 1200 magazine Jeriko na Australia na-àjà Bitcoin shopping ọrụ dị ka nke March 1st
Site taa Australia ...
Blockchain emefu ...
Previous Post:Chainalysis – ụlọ ọrụ na-ebibi ndị anonymity Bitcoin
Next Post:Olee otú m Echefuola na fọrọ nke nta 200 Bitcoin trading a n'ọnwa gara aga